မပျက်စီးဘဲကယ်တင်နိူင်သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အကျဉ်းချုပ် | The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ | Real Conversion
မပျက်စီးဘဲကယ်တင်နိူင်သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်
စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"မိစဉ်ဘဆက် ကျင်လည်သောအချည်းနှီးကျင့်ကြံပြုမူခြင်းမှ၊ ရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။ အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ၊ အညစ် အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြ လော့။" ( ၁ပေ ၁း ၁၈- ၁၉ ))
William Cowper (၁၇၃၁-၁၈၀၀) က လူသိများသောဓမ္မသီချင်းတွင် ဤလှပကျော့ ရှင်းသောစလုံးများကို ထည့်သွင်းရေးသားထားပါသည်။
ဤသည်မှာ C. H. Spurgeon (၁၈၃၄-၁၈၉၂) နှစ်သက်သောဓမ္မသီချင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ တရားဟောဆရားကြီးက ဤသို့ဆိုသည်။
ဤအကြောင်းအရာကိုတွေးတောခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဟောပြောခြင်း ကလွဲရင် ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာအဘယ်အရာမျှမရှိပါ။ယေ ရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ဧဝံဂေလိတရား၏အသက်သွေး ကြောပင်ဖြစ်ပါသည်။ (C. H. Spurgeon, "သွန်းလောင်းသောအ သွေးတော်"၊ ၁၈၈၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈၊ Metropolitan Tabernacle Pulpit, တရားပလ္လင်၊ အတွဲ ၃၂၊ စာ- ၁၂၁၊ Dr. Bob Ross က Pilgrim Publications တွင် ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်၊ စာတိုက် သေတ္တာ ၆၆၊ Pasadena, Texas ၇၇၅၀၁)
တရားဟောဆရာကြီး Spurgeon သည် ထိုသို့သောဖော်ပြချက်ကို အဘယ့်ကြောင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ သူသည် "သူ့အကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ဟောပြောခြင်းမှတပါး ကျွန်ုပ် အတွက် အခြားသောအရာမရှိပြီ" ဟု အဘယ့်ကြောင့် ပြောဆိုခဲ့သနည်း။ သင်သည် Metropolitan Tabernacle Pulpit တွင်ထုတ်ဝေသည့် ရာပေါင်းများစွာသောတရားဒေသနာ ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ဤသည်မှာ မှန်ကန်သောအရာဖြစ်သည်ကို မြင်တွေ့နိူင်ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့်နည်း။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအသုံးပြုသောသူတို့၏နယ်ပယ်တွင် အထင်ကရတရား ဟောဆရာကြီးက ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို အဘယ့်ကြောင့် သူ၏အဓိကဘာသာရပ်ဖြစ် သည်ဟုဆိုသနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အခြားအရေးပါသောအကြောင်းအရာ အခြားမရှိ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်မပါဘဲ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကယ်တင် ခြင်းမရားမရှိကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ ယနေ့ညနေတွင် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို အခြေခံ၍ စဉ်းစားဆင်ခြင်စေလိုသည်။ ထိုနှစ်ချက်စလုံး သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းဖြစ်သည့် ၁ပေ ၁း ၁၈- ၁၉ ကပင်ဖြစ်သည်။
၁။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် မဖောက်ပြန်ပါ။
၂။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် သင်၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအဖို့ လိုအပ်သည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် မဖောက်ပြန်ပါ။
ဆာလံကျမ်းတွင် ခရစ်တော်၏အသက်တာတွင်ပြည့်စုံလာသည့် ဤပရောဖက်ပြုချက် ကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်က ပေးထားပါသည်။
"အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို မရ ဏာနိူင်ငံ၌ ပစ်ထားတော်မမူ။ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောသူအား လည်းပုတ်စပ်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူဘဲလျက်၊-။" (ဆာလံ ၁၆း၁၀).
"ပုတ်ပျက်ခြင်း" အတွက် ဟေဗြဲစကားလုံးမှာ "ပျက်စီးခြင်း" သို့မဟုတ် "ဆွေးမြေ့ခြင်း" ဟုအဓိ ပ္ပါယ်ရပါသည်။ (Strong ၏ကျမ်းကိုးကားချက်)
ဆာလံကျမ်းထဲက ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ကိုးကားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို မရ ဏာနိူင်ငံ၌ ပစ်ထားတော်မမူ။ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောသူအား လည်း ပုတ်စပ်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူဘဲလျက်၊ အသက်ရှင်ခြင်း လမ်းကိုပြညွှန်တော်မူလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအ ကြောင်းကိုရည်မှတ်လျက်၊ ထိုခရစ်တော်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို မရ ဏာနိူင်ငံ၌ ပစ်ထားတော်မမူ။ အသားသည်လည်း ပုတ်စပ်ခြင်းသို့ မရောက်ဟု အနာဂတံသဥာဏ်နှင့်ဟောလေ၏။"( (တမန်တော် ၂း ၂၇၊ ၃၁ ) )
ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် အချို့တို့က ခရစ်တော်၏အသွေးအသားသည် ပြန်လည်ထ မြောက်သော်လည်း ၎င်း၏အသွေးတော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ဘေးဘက်တွင် စိမ့်ထွက် လာပြီး ပျက်စီးသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် မပျက်စီးနိူင် ဟုဆိုသည့်အခြားကျမ်းပိုဒ်ကိုပေးထားပါသည်။
"မိစဉ်ဘဆက် ကျင်လည်သောအချည်းနှီးကျင့်ကြံပြုမူခြင်းမှ၊ ရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။ အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ၊ အညစ် အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြ လော့။" ( ၁ပေ ၁း ၁၈- ၁၉ )
ဤကျမ်းပိုဒ်ရှိ "မပျက်စီးနိူင်သော" ဟူသည့်စကားလုံးသည် "ပျက်စီးသည်" သို့မဟုတ် "ဖျက်ဆီးခံရသည်" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ငွေနှင့်ရွှေသည် လောကကြီးတွင် ဖျက်ဆီးမရနိူင် သောအရာများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ဤလောကကြီးသည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံရသောအခါ ငွေနှင့်ရွှေသည်လည်း ပျက်စီးသွားပေလိမ့်မည်။ "မိုးကောင်းကင်သည် ကြီးသောအသံနှင့်တကွ ပျောက်သွားလိမ့်မည်။ လောကဓါတ်တို့သည် ပူအားကြီး၍ ပျက်ကြ လိမ့်မည်။ မြေကြီးကိုယ်မှစ၍၊ မြေကြီးပေါ်မှာပြုလုပ်သမျှသောအရာတို့သည် ကျွမ်းလောင်ကြ လိမ့်မည်" ( ၂ပေ ၃း ၁၀- ၁၁ ) ဟု ဆိုထားသည်။ ရှိသမျှသောအရာ (ဂရိစကားလုံး အက်တမ် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။) သည် လောင်ကျွမ်းပျက်စီးလိမ့်မည်။ လောက၌ရှိသမျှသောအရာတို့ သည် ဘုရားသခင်၏မီးအားဖြင့် အရည်ပျော်သွားပေလိမ့်မည်။ ( အမှန်ပျက်စီးမည်။) ထိုအရာ တွင် ငွေနှင့်ရွှေ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ "မြေကြီးပေါ်မှာပြုလုပ်သမျှသောအရာတို့သည် ကျွမ်း လောင်ကြလိမ့်မည်။"
သို့သော် ၁ပေ ၁း ၁၈- ၁၉ က ကျွန်ုပ်တို့ကို ပျက်စီးတတ်သောအရာအားဖြင့် ရွေး နှုတ်ထားခြင်းမဟုတ် "မပျက်စီးနိူင်သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်" ရွေးနှုတ်ကယ် တင်တော်မူကြောင်းဆိုထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ခရစ်တော်၏မပျက်စီးနိူင်သော၊ မပုတ် ပျက်နိူင်သော၊ အသွေးတော်အကြောင်းကိုပြောထားပါသည်။
Frontline မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးက ဤသို့ဆိုသည်။
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းသောအခါ၊ မြေကြီးပေါ် ရှိရွံ့နွံ့ကြားတွင် ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ်။ မပျက်စီး မပျောက်နိူင်ပါ။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏စကားတော်က မပျက်စီးနိူင်သောအသွေးတော်ဟုဆိုထားပါသည်။ ကာရနီတောင် ကုန်းပေါ်ရှိသဲမှုန်များသည် သိုးသူငယ်၏အဖိုးထိုက်သောအသွေး တော်ကို မပျက်စီးစေနိူင်ပါ။ "မပျက်စီးနိူင်သော"ကြောင့် ခရစ် တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင် အသုံးချခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၊ အားဖြင့် ထ မြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပါသည်။ မပျက်စီးနိူင်သောအသွေးတော် က ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် သဘာဝလွန်လုပ်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် ထမြောက်နိူင်သည်ဟုသာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ (Frontline မဂ္ဂဇင်း၊ မတ်/ဧပြီလ၊ ၂၀၀၁၊ စာ- ၅ )
ယေရှုသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါ ဤသို့ဆိုသည်။
"ငါ့လက်ကိုကြည့်ကြလော့။ ငါ့ခြေကိုလည်း ကြည့်ကြလော့။ ငါ့ ကိုယ်ပင်ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုကြည့်ရှုစမ်းသပ်ကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ မြင်သည်အတိုင်း အရိုးအသားနှင့်ပြည့်စုံ၏။ တစ္ဆေမည်သည်ကား ဤကဲ့သို့မပြည့်စုံဟု မိန့်တော်မူလျက်၊" (လုကာ ၂၄း ၃၉ )
တပည့်တော်များသည် ရှင်ပြထမြောက်ပြီးသောခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ရသည်ကို အလွန်အံ့ဩ တွေဝေကြပါသည်။ သူတို့က "တစ္ဆေကိုမြင်ကြသည်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်။" (လုကာ ၂၄း ၃၇) ယနေ့ကာလတွင် များစွာသောသူတို့က ယေရှုသည် တစ္ဆေကဲ့သို့ထမြောက်သည်ဟု ထင်မြင် ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်များက ဝိညာဉ်-ခရစ်တော်အယူအဆကိုမှန်ကန်စေသည်။ ထိုသို့မဟုတ် ပါ။ သူသည် ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားနှင့်အရိုးအားဖြင့် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် တ ပည့်တော်များအား သူ၏လက်ဖဝါးနှင့်ခြေဖဝါးရှိဒဏ်ရာများကိုကြည့်ကြရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
"ထိုအခါ သောမအား သင်၏လက်ညှိုးကိုဆန့်၍ ငါ့လက်ကိုကြည့် လော့။ သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ ငါ့နံဖေးကို စမ်းသပ်လော့။ ယုံမှား ခြင်းမရှိနှင့်။ ယုံလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။" (ယောဟန် ၂၀း ၂၇ )
ခရစ်တော်သည် သောမအား လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူသည့်အချိန်၌ စစ်သားများ ကလှံနှင့်ထိုးသည့်နံဘေးကို လက်ဆန့်၍ ကိုင်ကြည့်ရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသောအချက်မှာ ဤအချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်က တပည့်တော်များ အား သူ၏လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါး၊ နံဘေးများကိုကြည့်ရှုရန် ပြောဆိုသည်။ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက် သော"အသွေးအသားနှင့်အရိုး" ခန္ဓာတွင် အသွေးကျန်ရှိလျက်နေလျှင် ထိုဒဏ်ရာဒဏ်ချက် များမှ အသွေးများယိုစီးကျလာသည်။ သို့သော် သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင် အသွေးမကျန်ခဲ့ပါ။ အသွေးသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ထမြောက်တော်မူပြီ။
ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီးနောက် မာဂဒလမာရိသည် ယေရှုနှင့် တွေ့သောအခါ ယေရှက ဤသို့ဆိုသည်။
"ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုမဖက်နှင့်ဦး။ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်ထံသို့ မတက်ရသေး။ ငါ့ညီတို့ရှိရာသို့သွားလော့။ ငါ၏ခမည်းတော်တည်း ဟူသော သင်တို့၏ခမည်းတော်၊ ငါ၏ဘုရားသခင်တည်းဟူသော သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ငါတက်ရမည်အကြောင်းအရာ ကို ကြားပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်။" (ယောဟန် ၂၀း ၁၇ )
သို့သော် ၎င်းအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးမကြာပါ၊ တပည့်တော်များသည် "လာပြီး ခြေတော်ကိုဘတ် ယမ်းလျက်ကိုးကွယ်ကြ၏။"(မဿဲ ၂၈း ၉ ) သူသည် မာရိကိုမူ ထိခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ သူသည် ဘုရားသခင်ထံသို့မရောက်သေးပါ။ သို့သော် ခဏကြာသော် တပည့်တော်များအား ခြေတော်ကိုဘတ်ရမ်းပြီးကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ Scofield မှတ်စုက ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် သမ္မာ ကျမ်းစာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟု ထင်ရသော အောက်ပါရှင်းပြချက်ကိုပေးထားပါသည်။
ယေရှုသည် မာရိအား ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက အပြစ်ဖြေရာနေ့ကို ပြည့်စုံစေသကဲ့သို့ စကားပြောတော်မူသည်။ (ဝတ်ပြု ၁၆ ) ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းအမှုပြီးမြောက်သောအခါ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သူ၏မြင့်မြတ် သောအသွေးတော်ကိုတင်ပြရန် လမ်း၌ရှိလျက်နေသည်။ ၎င်း သည် ဥယျာဉ်ထဲ၌ မာရိနှင့်တွေ့သောအချိန်နှင့်မဿဲ ၂၈း ၉ ကြားကာလတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွတော်မူသည်။ ( ယောဟန် ၂၀း ၁၇ Scofield မှတ်စု )
ဤသည်မှာ ဒေါက်တာ John R. Rice ယုံကြည်သောအမြင်နှင့်ထပ်တူကျပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ရှိသည့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများသည် အသွေးကိုဆောင်ယူပြီး အသန့်ရှင်းဆုံးငှါနရှိ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တွင် ချထားသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် မာရိ နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်တပည့်တော်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကြားတွင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ၎င်း၏အသွေး တော်ကိုဆောင်ယူသွားသည်။
"ယခုမှာ လူလက်ဖြင့်မလုပ်၊ ဤလောကဓာတ်နှင့်မစပ်ဆိုင်သော၊ သာ၍ ကြီးမြတ်စုံလင်သောတဲတော်၌၊ နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သော ခရစ်တော်သည် ငါတို့အဖို့ ထာဝရ ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံရ၍ ဆိတ်အသွေး၊ နွားကလေးအသွေး နှင့်မဟုတ်၊ မိမိအသွေးတော်နှင့်သန့်ရှင်းရာငှါနထဲသို့ တခါတည်း ဝင်တော်မူ၏။" (	(ဟေဗြဲ ၉း ၁၁- ၁၂ ) )
ဤကျမ်းပိုဒ်က သူသည် "အသန့်ရှင်းဆုံးငှါနသို့တခါတည်း" ဝင်တော်မူသည်ဟုဆိုထားသည် ကိုမှတ်သားပါ။ ၎င်းမှာ အခြားအချိန်ဆိုတာထက် သူတက်ကြွသည့်အချိန်တွင်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
"ထိုသို့သခင်ဘုရားသည် တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍၊ ဘုရားသခင်၏ လက်ယာတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏။"( (လုကာ ၁၆း ၁၉ ) )
သူသည် ဘုရားသည်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူသည်အကြောင်းကို ဓမ္မသစ် ကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့အား ထပ်ခါခါမိန့်တော်မူသည်အပြင် ဤကျမ်းပိုဒ်ကလည်း တပည့်တော်များ နှင့်စကားပြောပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်း ထိုင်နေတော်မူရန်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်အ ကြောင်းကို မိန့်မူသည်။ သူသည် တက်ကြွတော်မူပြီး မိမိ၏အသွေးတော်ကို ကောင်းကင်ဘုံရှိ "အသန့်ရှင်းဆုံး ငှါနတော်" တွင် ချထားမည်အကြောင်း ဤသည်က အနည်းဆုံး ဖြစ်နိူင်ခြေရှိ စေသည်။ ( ဟေဗြဲ ၉း ၁၂ )
"ရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။ အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ၊ အညစ် အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြ လော့။" (( ၁ပေ ၁း ၁၈- ၁၉ ) )
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည်ယခုတွင်မူ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ကရုဏာပလ္လင်တွင်ရှိတော်မူ သည်။ ထိုအရာသည် ပျက်စီးနိူင်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ၄င်သည် မပျက်စီးနိူင်ပါ သို့မဟုတ် မ ဆွေးမြေ့နိူင်ပါ။ သဘာဝလွန်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယင်းကို ဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင် ခရစ် ယာန်ဘာသာသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ပါ။ သို့သော် မျက်လှည့်သဘောမျိုးတော့မဟုတ်။ သင် သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို ချယ်လှယ်၍မရပါ။ မျက်လှည့်မဟုတ်ပါ။ အသွေးတော် သည် သဘာဝလွန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မျက်လှည့်နှင့်တုန့်ပြန်ထားသည်မဟုတ်။ "ဆုံးဖြတ် ချက်ဝါဒ" သည် မျက်လှည့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ငြင်းပယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ် သည်။ အသွေးတော်ဖြင့် သင့်ကိုဆေးကြောရန် ဆုံးဖြတ်သောသူမှာ ဘုရားသခင်သာဖြစ် သည်။
ဒေါက်တာ John MacArthur သည် ဤအချက်ကို မယုံကြည်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိ သည်။ သူသည် အသွေးတော်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး မှားယွင်းသောအယူအဆများကို Colonel R. B. Thieme, Jr. အမည်ရှိ သူတစ်ယောက်ထံက ရရှိထားသည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်သိသည်။ MacArthur က သွန်သင်ပေးသည်အတိုင်း သွန်သင်ပေးထားသည့် Thieme ၏ သမ္မာကျမ်းစာ အပိုင်းလိုက်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကို လူငယ်လေး John MacArthur တက်ရောက်နေသည့် အချိန် ၁၉၆၁ခုနှစ် မိုးရာသီတွင် ကျွန်ုပ်လည်း ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Dr. MacArthur သည် ၎င်း၏အယူအဆများကို R. B. Thieme ထံကရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်ကို သိပါသည်။ အ ကြောင်းမှာ ထိုအချက်များနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သူက မှတ်စုများရေးသားနေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပါ သည်။ Thieme က "အသွေးတော်" ဟူသောစကားလုံးမှာ "သေခြင်း" ဖြစ်သည်ဟု သင်ပေးပါ သည်။ "အချို့သောအသွေးများသည် လေထဲရှိအချို့နေရာများတွင် ပေါ်လောပေါ်နေခြင်းမ ဟုတ်ပါ။" ဤသည်မှာ ဒေါက်တာ MacArthur ၏တရားဒေသနာများတွင် အချိန်တိုင်းကြားနေ ရသည့်အရာဖြစ်သည်။ သူသည် ဤအယူအဆများကို ဒေါက်တာ Colonel R. B. Thieme ထံ က ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်သိသည်။ ဤသည်မှာ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဒေါက်တာ MacArthur သည် အခြားအရာများတွင် ကောင်းမွန်သောအယူဝါဒ များကို သွန်သင်ပေးနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်က ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အကြောင်း နှင့်ပါတ်သက်ပြီး R. B. Thieme ၏ ထူးဆန်းသောအယူဝါဒထဲက အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ် မြောက်လာရန် ဒေါက်တာ MacArthur အတွက် အပတ်တိုင်း ဆုတောင်းကြပါသည်။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် သင်၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သည်။
အခြေပြုကျမ်းက သင်တို့ကို ပျက်စီးတတ်သောအရာနှင့်ရွေးနှုတ်သည်မဟုတ်၊ ခရစ် တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးဝယ်တော်မူသည်။ ၁ပေ ၁း ၁၈ ရှိ"ရွေးနှုတ်သည်" ဟူသော စကားလုံးမှာ ဂရိစကားလုံးတွင် "ဖြေသည်" သို့မဟုတ် "လွှတ်သည်" ဟုဆိုလိုသတည်း။ (Strong's, Vine’s, "လွှတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေသည်။" (Vine's)
သင်သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် "ဖြေခြင်း "နှင့် "လွှတ်ခြင်း" အမှန်တ ကယ်မခံစားရလျှင် သင်သည် ထာဝရကာလတိုင်အောင် ဤသို့ခံစားရမည်။
၁။	"ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်းအောက်တွင်ရှိနေသည်။" (ဂလာ ၃း ၁၃ ) သင် သည် ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်းကိုခံရသည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် ၎င်းကို စောင့်ထိန်းနိူင်ခြင်းမရှိပါ။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရား ကို စုံစုံလင်လင်လိုက်လျှောက်နိူင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ပညတ်တရား သည် သင့်ကို ကျိန်ခြင်းပေးတော်မူသည်။ ၎င်းက သင်သည် အပြစ်ရှိ တော်မူသည်ကိုပြသပြီး တရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်နိူင်မည့်နည်းလမ်း ကိုမပေးနိူင်ပါ။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်မှတပါး သင်၏အပြစ်ကိုဆေး ကြောနိူင်သည့်အရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပညတ်တရား၏ကျိန် ခြင်းမှ "လွတ်မြောက်ခြင်း " နှင့် " လွှတ်ခြင်းအခွင့်" ကိုရနိူင်ပါသည်။
၂။	သင်သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် "လွှတ်ခြင်း " နှင့် "လွတ် မြောက်ခြင်း" မရှိလျှင် စာတန်၏အုပ်စိုးခြင်းအောက်တွင် ထာဝရရှိနေရ မည်ဖြစ်သည်။ သူ၏အလိုတော်နှင့်အညီချုပ်နှောင်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (၂တိမောသေ ၂း ၂၆ ) ခရစ်တော်၏အသွေးတော်မှတပါး သင်ကို "လွတ် မြောက်" သို့မဟုတ် "ဖြေလွှတ်သော" အရာမရှိပါ။
၃။	သင်သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် "လွှတ်ခြင်း " နှင့် "လွတ် မြောက်ခြင်း" မရှိလျှင် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏အမျက်တော်နှင့် တ ရားစီရင်ခြင်းအောက်တွင်ထာဝရရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေ တော်မှတပါး သင့်အား "လွတ်မြောက်" စေပြီး ဘုရားသခင်၏တရားစီရင် ခြင်းဘေးမှ "ကယ်လွှတ်မည်။"
အို၊ ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ သင်သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်းမှ သင့်ကိုလွှတ်ရန်၊ စာတန်၏လက်ထဲကျွန်ခံရာက လွှတ်ခြင်းကိုခံရ ရန်၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှလွှတ်မြောက်စေရန် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုပိုင်ဆိုင် ထားရပါမည်။ အို၊ သင် ပိုင်ဆိုင်ရမည္၊ ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ကျိန်ခြင်း၊ ချုပ်နှောင်ခြင်း၊ နှင့်အမျက် တော်ဘေးမှလွတ်မြောက်စေရန် ခရစ်တော်၏အဖိုးထိုက်သောအသွေးတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ထပ်၍ပြောပါမည်။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုပိုင်ဆိုင္ရပါမည္။ ယေရှုကို အမြန်ယုံကြည်ကိုး စာလာမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။
သငဩညျ Dr. Hymers ၏တရားဒသနောကို အငတြာနကပြေါတြှငျ
www.realconversion.com သို့မဟုတျ www.rlhsermons.com. ဖှငျ့ အပတစြဉတြိုငျး ကှညျ့ရှုနိူငပြါသည။ြ “တရားဒသနောစာမူ” ကိုနှိပပြါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ဆုတောင်းခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။
(Count Nicholas Von Zinzendorf ၁၇၀၀-၁၇၆၀ ရေးစပ်ပြီး
John Wesley ၁၇၉၃-၁၇၉၁ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
""မိစဉ်ဘဆက် ကျင်လည်သောအချည်းနှီးကျင့်ကြံပြုမူခြင်းမှ၊ ရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။ အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ၊ အညစ် အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြ လော့။" ( ၁ပေ ၁း ၁၈- ၁၉ ))
ဆာလံ ၁၆း ၁၀၊ တမန် ၂း ၂၇၊ ၃၁၊ ၁ပေ ၁း ၁၈-၁၉၊ ၂ပေ ၃း၁၀-၁၁
လုကာ ၂၄း ၃၉၊ ၃၇၊ ယောဟန် ၂၀း ၂၇၊ ၁၇၊ မဿဲ ၂၈း ၉၊ ဟေဗြဲ ၉း ၁၁-၁၂၊ မာကု ၁၆း ၁၉။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် သင်၏ကယ်တင်ခြင်း အတွက်လိုအပ်သည်။ ဂလာတိ ၃း ၁၃၊ ၂ တိ ၂း ၂၆၊ ဆာလံ ၇း၁၁